IHemsedal ValleyView Apartment-ngoku ivulelwe ukubhukisha - I-Airbnb
IHemsedal ValleyView Apartment-ngoku ivulelwe ukubhukisha
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEli-Ann
Le yiflethi ye-100 kvm enamagumbi okulala ama-4 kunye namagumbi okuhlambela ayi-2 (sauna) embindini wayo yonke into eHemsedal. Inombono omhle kakhulu wongamela i-ski sentre kunye neentaba. Sihlala phezu kweflethi. Sinabantwana ababini, abaneminyaka eli-10 kunye nesi-7 ubudala. Bayakuthanda ukudlala ngaphandle kwigadi yethu yendalo engumnqantsa. Kungenzeka ukuba ubone umntwana (okanye umntu omdala) ohamba ngesantya esiphezulu edlula ifestile yakho esuka kwibalcony engentla ukuba kuye kwawa kakhulu ikhephu. Abantwana bakho (kunye nawe) wamkelekile ukuba ujoyine.
Yindawo ezolileyo, kodwa isembindini wayo yonke into. Indawo yokumisa ibhasi yimizuzu emi-3 yokuhamba (okanye ukutyibilika ngomzuzu o-1 ukuba indlela igqunywe likhephu) phantsi kwendlela. Ungatyibilika yonke indlela ubuyela embindini, okanye unokukhwela ibhasi yasimahla ugoduke. Iziko laseHemsedal likuhambo lwemizuzu emi-5. Embindini ungafumana, iivenkile ezinkulu (ezivula iintsuku ezisi-7 ngeveki), ivenkile yotywala, iivenkile zemidlalo, iirenti zeski, iivenkile zangaphakathi, iivenkile zempahla, ibhanki, ikhemesti, isikhululo segesi, iziko leLynx Well Yoga elinendawo ye-spa (kakhulu. kucetyiswa), umlungisi weenwele, iindawo zokutyela kunye neebhari kwaye okokugqibela kodwa kungancinci ii-cafees ezincinci ezi-2, ezinikeza ukutya okuthandekayo, okutsha, iipastries kunye nekofu.
Xa uhlala apha uya kufumana izinto ezisebenzayo njengomatshini wokuhlamba kunye nesomisi. Ikhitshi inako konke okufunayo, ngaphandle kokutya nesiselo, kodwa sibonelela ngezinto eziyimfuneko njengeoyile, ityuwa kunye nepepile, kunye nezixhobo zokuvasa. Amanzi acociweyo alungile kwaye umnini weScandinavian Alps Coffee Roasters ngummelwane osondeleyo, ke ukuba ungathanda ikofu entsha egcadiweyo eyosiwe emnyango, sazise.
Kufuneka siyikhathalele indalo ukuze siyonwabele, ngoko ke siyakucela ngobubele ukuba uphinde usebenzise inkunkuma yakho emigqomeni ngaphandle.
Ilinen/iitawuli azifakwanga kwirenti, kodwa ziyafumaneka. Sinokubonelela oku ngentlawulo emiselweyo ye-NOK 170 ngomntu ngamnye (le mali ifanayo njengoko sihlawula inkampani yokucoca).
Umbuki zindwendwe ngu- Eli-Ann